Click kugoverana musi Twitter (Unozaruka pahwindo itsva)
Click kugoverana on Facebook (Unozaruka pahwindo itsva)
Zvinyorwa zvichaputswa vhiki ino, uye Bruce Arians nderimwe remazita anouya mumutsara mumwechete neuyo. Tampa Bay Buccaneers murairidzi ari mukumhanyisa kuve mukuru mukuru murairidzi kuhwina Super Bowl. Pazera remakore makumi matanhatu nemasere, anogona kutyora rekodhi yazvino yakachengetwa naBill Belichick, anga aine makore makumi matanhatu nematanhatu paakabata zita reSupp Bowl LIII nevaPatrioti uye mukwikwidzi Super Bowl LV MVP inopesana, Tom Brady. Mumwe chete akamira pakati pake uye zita iri murairidzi mukuru weKansas City, Andy Reid, uyo ari 1-1 mumashure ake maviri ekupedzisira eSupp Bowl.
Chikamu che55th cheSupp Bowl chakagadzirirwa kutepfenyurwa paCBS pa6: 30 pm ET. Kansas City ndiyo inodiwa kukunda kuhwina mutambo mune ichangoburwa maChief vs Buccaneers mikana yakanyorwa pane William Hill, iine pamusoro-pasi pemapoinzi akazara ari 56.5. Usati wavhara zvaunotora, SportsLine mukuru muongorori uye nyanzvi yeKansas City, Larry Hartstein, anogovera pfungwa dzake pamutambo. Anobata 16-3 rekodhi pane ake ekupedzisira 19 ekuparadzira mapiki akaratidzira Kansas City.
MaSabhuku anogona kuvhara sei
Reid inyanzvi kuronga anoviga hunyengeri hwakawanda kumusoro kwake. Kune rimwe chete, vane timu inodzivirira yemitambo iyo inogona kukiya pamusoro pekupfuura kwakadzika kweTampa Bay - zano rakamisikidzwa naTom Brady apo vaitungamira mwaka wenguva dzose uye 2021 NFL playoffs muzana rekuyedza kwekuyedza mayadhi angangoita makumi maviri pasi pevhu.
Kupfuurirazve, Kansas Guta rine mikombero yakawanda muligi pamakore masere pakukanda kwakadzika uye rakabvumidza rechinomwe-rakapasa kupfuura rekupasa re63.6 pane izvo kuedza.
Maitiro maBuccaneers anogona kuvhara
Kune rimwe divi remitambo, isu tine Chris Godwin nemaoko ake anopisa. Iye-wechina-gore anogamuchira ane mashanu anogamuchira touchdowns mune ake matanhatu apfuura kuoneka kweBuccaneers. Pakutanga kwemwaka, akarekodha matatu achigamuchira anobata-bata mumitambo yake mipfumbamwe yekutanga. Akatorawo makumi maviri nemaviri ekugamuchira mayadhi mu223 NFL playoffs chete, ichiita imwe chete postseason rekodhi yeiyo franchise.
Imwe nzira iyo maBuccaneers anogona kuvhara uye kuhwina iyo Super Bowl LV iri kuburikidza nekudzivirira. Ivo vakora zvibodzwa makumi mana neshanu pamatanho manomwe, vachimisidzana munzvimbo yechitatu pamwe neakawanda positi yakapihwa nechero timu yeNFL kubva mukutendeuka kubva mumitambo yekutamba kubvira 41.
Kuvharira mune ako Buccaneers vs Chiefs sarudza
Pakupedzisira, ruzivo rwaHartstein rwezvikwata zviviri izvi runomuswededza padhuze nepamusoro pekutora kwakazara. Saka, zvese zvasara kuita kutsvaga Bitcoin sportsbook iyo inorumbidza kufembera kwako uye inovaka zvakanakisa NFL inoshandiswa mutambo usati watanga.
NFL Musangano Wemakwikwi 2021 Kufanotaura
Chikamu Chinogadzirirwa Super Bowl LV: Buccaneers vs Chiefs
Pakutanga Super Bowl LV Matambudziko Uye Kufungidzira
Posted in Bitcoin bhora kutengesa, NFLTagged Super Bowl LV